အဝေးထိန်း remote control system များဆွေးနွေးလိုသည်။ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ > အဝေးထိန်း remote control system များဆွေးနွေးလိုသည်။
View Full Version : အဝေးထိန်း remote control system များဆွေးနွေးလိုသည်။
အဝေးထိန်း system တွင်ကျွန်တော်သိထားသလောက်တော့ 1. infrared ray system
2. radio wave system ဟူပြီးသိရှိထားပါသည်။
infrared ray system ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပုံမှာ အနည်းငယ်ရိုးရှင်းပါသည်။သို့သော် radio wave control system ဖြင့်တည်ဆောက်သောပုံမှာရူပ်လှပါသည်။
သို့သော် radio wave control system ဖြင့်တည်ဆောက်သော် circuit များ၏အားသာချက်မှာ ဝေးကွာသော် အကွာအဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ infrared ray system
ကိုအိမ်မှာရှိသော tv or dvd remote များဖြင့် အဖွင့်အပိတ် လုပ်နိုင်သည်။ circuit တည်ဆောက်ရာဝါသနာရှင်များအတွက် circuit diagram တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ပါမည်။ တည်ဆောက်လိုသူများအနေဖြင့် circuit တွင်ပါဝင်သည့် parts များအားမောင်ခိုင်လမ်းတွင်ရှိသော electronic ဆိုင်များတွင်ကိုတိုင်ဝယ်
ယူနိုင်ပါသည်။ eg. (သီတာ၊ chip ).........
အခုပုံသည် တည်ဆောက်ရာတွင်ရှူပ်ထွေးလှပါသည်။သို့သော် ဤပုံသည်လက်တွေ့တည်ဆောက်ရာတွင် အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။အခက်တွေ့ပါက မေးနိုင်ပါသည်။
်ကျွန်တော်သိချင်တာက radio wave control တည်ဆောက်တဲ့ circuit ပါ ။
လေးစားစွာဖြင့် mg kyi thar .............
သိတယ်လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး..အီလက်ထရောနစ်အဖွဲ့တွေလက်ရှောင်တယ်ဖြစ်နေမှာစိုးလိုဗျာ.... ကိုကြည်သာရေ....ပထမဆုံး infrared remote control အကြောင်းပေါ...လက်တွေ့မသိဘူး...စာတွေ့လေး.. ဒီကောင်ရဲ့signal က အလင်းလွတ်ဒိုင်အုတ်(light emitting diode ) ကို အခြေခံထားတာ သူကို power ပေးလိုက် ရင်ဒီကောင်က အလင်းထုတ်တယ် သူလှိုင်းနှုန်းက ရေဒီယိုလှိုင်းထက်အလျားတိုတယ် ပြီးတော့ ဒီစနစ်က တိုက်ရိုက်လှိုင်း(direct wave) နဲ အလုပ်လုပ်တာ အဲလိုဆိုတော့ အားနည်းချက်က ရှေ့တည့်တည့်နီးပါးလောက်မှ ရတယ်ဗျာ ထောင့်အများကြီးစောင်းသွားရင် မရတော့ဘူး.......
နောင်တစ်ခုက radio wave control system အကြောင်းဗျ...radio ဆိုတဲ အတိုင်းဒီကောင်က လွင့်ပိုင်း (transmitter) နဲ ဖမ်းပိုင်း(receiver) နှစ်မျိုးပါတယ်...တစ်ခုနဲတစ်ခုဆက်စပ်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် အင်တီနာ တစ်ခုချင်းစီလိုတယ်...transmitterရဲ အင်တာနာ ကနေ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေ ထုတ်လွင့်တဲအခါမှာ သူက အခြေအနေ သုံးမျိုးနဲ့ထုတ်လွင့်လိုက်တာ..သူတိုတွေကတော့
(က) ကောင်းကင်လှိုင်း (sky wave) ကောင်းကင်နဲတစ်ဆင့်ခံပြီးထုတ်လွင့်တာ
(ခ) တိုက်ရိုက်လှိုင်း ( direct wave) အရပ်မျက်နှာတစ်ခုတည်းကို ဦးတည်ပြီးလွင့်တာ
(ဂ) အရပ်မျက်နှာအမျိုးမျိုးဆီကို ပျံနှံနဲ့လှိုင်း
အဲလိုမျိုး လွင့်ထုတ်တာကိုက အမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုတောဗျာ infrared remote ထက်သာတာပေါ့.. transmitterနဲ့receiver တို့ရဲ လွင့်အားဖမ်းအားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ အကွာအဝေးက ဖြစ်ပေါ်လာတယ်...အဲဒီအကွာအဝေးအတွင်းမှာ ဘယ်နေရာကနေဖြစ်ဖြစ် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လိုရတယ် radio remote control ရဲ့ control လုပ်နိုင်တဲ အကွာအဝေးအတွင်းမှာ သူခိုင်းစေတဲအရာဝထ္ထုတစ်ခုက ဘယ်အရပ်မျက်နှာမှာ ရှိနေနေ signal တွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်..ရေဒီယိုလှိုင်းတွေကို ထပ်ပိုင်းထားတာတော့ အမျိုးအစား (၁၁)မျိုးရှိတယ်-
(၁)Extremely low frequency ELF 1 3–30 Hz 100,000 km – 10,000 km
(၂)Super low frequency SLF230–300 Hz 10,000 km – 1000 km
(၃)Ultra low frequency ULF3300–3000 Hz 1000 km – 100 km
(၄)Very low frequency VLF43–30 kHz 100 km – 10 km
(၅)Low frequency LF530–300 kHz 10 km – 1 km
(၆)Medium frequency MF6300–3000 kHz 1 km – 100 m AM
(၇)High frequency HF73–30 MHz 100 m – 10 m
(၈)Very high frequency VHF 8 30–300 MHz 10 m – 1 m FM
(၉)Ultra high frequency UHF9300–3000 MHz 1 m – 100 mm
(၁၀)Super high frequency SHF 10 3–30 GHz 100 mm – 10 mm
(၁၁)Extremely high frequency EHF 11 30–300 GHz 10 mm – 1 mm
radio remote control စနစ်တစ်ခုရဲ့ ဆားကစ်ပုံစံလေးကိုအောက်မှာကြည့်လိုက်ပါ....
ကျွန်တော် RF remote control ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုသိချင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက receiver circuit ရော၊ transmitter circuit ရော ဆောက်လုပ်ပုံတွေကိုသိချင်ပါတယ်။ circuit diagram တွေကိုလိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ပြီး circuit diagram ထဲက components တွေကကောဘယ်မှာဝယ်လို့ရမလဲဆိုကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ သိတဲ့သူရှိရင်ဖြေကြားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Note: Ming no longer manufactures the RE-99 receiver & TX-99 transmitter RF components. We will leave this project up for users that may still have the Ming RF components.
If you plan to build this project, simply replace the RE-99 receiver & TX-99 transmitter with the RWS-434 & TWS-434A RF receiver & transmitter modules found HERE (http://www.rentron.com/PicBasic/RemoteControl.htm). These circuits will work with any RF transmitter and receiver modules.
Due to the huge interest in this project, I have just recently finished the NEW schematics. The older schematics were scanned and pretty poor quality. These new ones should make it considerably easier to recognize the parts used for the project. The Ming RF transmitter and receiver boards used for this project are relatively inexpensive and perform admirably considering the meager price. Using the quarter wave antennas, I have had some excellent results with operating distance as well as overall operation. The Ming modules come ready to plug into your application and only require these simple interface circuits shown here to build your own complete RF remote control system.
This project uses the Ming TX-99 V3.0 300 MHz AM, RF Transmitter module shown below for transmitting data.
The photo above shows the Ming TX-99 V3.0. Once you have the Ming board you're ready to build the interface circuit shown below. The switches SW1-SW4 let you select the logic levels or (data) to send to the receiver. The logic levels present at the Holtek HT-12E encoder pins D0-D3 will be transferred to the receiver. The circuit shown below will transmit continuously if the pin #14 (TE) is left connected to ground. If you want your transmitter to transmit only when you pushabutton, simply break the circuit ground connection using another switch. By using another switch to break the ground connection, you will save power in your transmitter circuit and only transmit when you push the pushbutton switch that you're using to break the ground power connection.
Here'saquick sample of how to configureaswitch to power up the transmitter and enable the transmission:
Using the pushbutton switch to make/break the ground connection for the power circuit to your transmitter, you save power and only transmit data when you push the switch. You can useastandard LM7805 +5 volt regulator, or the smaller version usinga78L05 +5 volt regulator in the T0-92 style package to save space. The 78L05 T0-92 style +5 volt regulator is about the same size asanormal transistor and allows you to build the transmitter circuit small enough to fit intoasmall handheld plastic enclosure. The power requirements for this circuit are minimal and the 78L05 is more than capable of delivering sufficient current for operation.
Note: If you plan to use (only)anine volt battery, you can eliminate the filter capacitors C1 & C2. If you useawall wart type power supply or you build the project onabreadboard, include the capacitors for filtration.
ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ ဖူးတဲ့Remote Control ပိုင်းလေးပါ ...
မြန်မာလိုပြန်နေရင် ရှုပ်နေမှာ စိုးတဲ့ အတွက် မူရင်းအတိုင်းလေးပဲ တင်ပေးထားပါတယ်။
ကိုsawkyiiphyu လည်းမအားသေးဘူးနဲ့ တူပါတယ် ..
သူလာရင် ကျွန်တော်ထက် ပိုပြီးနားလည်အောင် ရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်..
ကိုဦးပုံက အရှေ့ က power supply နဲ့5V regulator အပိုင်းဘဲပါပြီး အနောက်က transmitter အပိုင်းပြတ်ကျန်ခဲ့သလိုဘဲနော်???
ဆောရီး ကိုဦး တွေ့ ပြီ။ hyperlink ထဲမှာ ရပြီ။
ဟိုးအပေါ်ဆုံးက #1 ကိုမောင်ကြည်သာ ပုံလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် ပြန်တင်ပေးပါအုံး။ ဘာပုံမှမမြင်ရတော့ဘူး။
ဟုတ်တယ် ကိုညီညီရေ ..
ကျေးဇူးပဲ ကျွန်တော် ကျန်ခဲ့ တာ .. ဟီးဟီး:doh:
Click picture for the transmitter circuit
The header marked H1 in the schematic below allows you to simply plug the Ming transmitter module directly into the transmitter circuit. The DOUT pin #17 of the HT-12D sends serial data to the Ming TX-99 module which in turn transmits this serial data to the receiver circuit shown in the receiver schematic later on in this project article.
simple RF remote control ကိုပြုလုပ်ချင်ရင်တော့ ထင်ရှားတဲ့ဥပမာကတော့ ကလေးကစားစရာကားလေးကို control ပေးတဲ့ RF remote control လိုပြောရမှာပဲလေ......သူကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင် တော့ transmitter module တစ်ခု receiver module တစ်ခု ပြီးရင်တော့ encoder နဲ့ decoder IC နှစ်ခုလိုပါတယ်...၀ယ်ရင်တော့ လွင်ပိုင်းနဲ့ဖမ်းပိုင်းကို တဆက်တည်းဝယ်ရပါမယ်...IC ကို လည်းထိုနည်းလည်းကောင်း ပဲ တဆက်တည်းဝယ်ရပါမယ်...encoder နဲ့ decoder IC ၀ယ်ရင်တော့ အရေးကြီးသွားပါပြီ ကိုယ်သုံးတဲ့ အလုပ်အပေါ်မှာမူတည်းပြီးဝယ်ဖိုလိုပါတယ်.....ဥပမာ..ကိုက မော်တာတစ်ခုကို ရှေ့သွားတာနဲ နောက်ကိုသွားတဲ့ အလုပ် နှစ်ခုအတွက်ပဲဆိုရင်တော့2bit encoder နဲ့ decoderလောက်ဆိုရပါပြီ....ဒီထက်ပိုပြီး ဘယ်ကွေ့ညာကွေ့ပါထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့4 bit လောက်ဆိုရပါပြီဗျာ......ဒီပစ္စည်းတွေရပြီးရင်တော့ RF remote control ကို စလုပ်လိုရပါပြီ........အောက်မှာတော့သူများတွေလုပ်ထားတဲ ...ဆားကဒ်ပုံလေးကိုပြထားပေး လိုက်ပါတယ်.....သူတို့ဟာနဲသာRF remove control လုပ်ရင်တော့ ဈေးကြီးတာပေါ့....ဒီထက်ပိုပြီးသေသေချာချာကြည့်ချင်ရင် တရုတ်လုပ် ကလေးကား RF remote control လေးကိုဝယ်ပြီးဖွင့်ကြည့် လိုက်လိုရပါတယ်...၅၀၀၀ ထောင် ၆ထောင်ဆိုရင်အဲဒါဟာရပြီဗျာ....ပုံမှာပြထားတဲ module ကတော့TWS/RWS Modules & 8-Pin Encoder/Decoder IC ဖြစ်ပြီး ၂၅ ဒေါ်လာလောက်ရှိတယ် လို သူweb မှာပြထားပါတယ်...မြန်မာမှာလည်း ရမယ်လိုထင်ပါတယ်...ဒီထက်ဈေးပေါတာတွေပေါ့ ကိုရေခါးမေးကြည့်မှရမယ်ထင်တယ်....သူတော့ဟိုတစ်ခါ picအကြောင်းရေးတဲ့ထဲမှာဆိုင်နာမည်တော့ပါတယ်ထင် တယ် မမှတ်မိတော့ဘူး.................
transmitter module and encoder circuit diagram
receiver module and decoder circuit diagram
အပေါ်မှာပြထားတဲ transmitter ရဲ့  ပါဝါက ၈မီလီဝပ် (8 mW) ဖြစ်ပြီး frequency ကတော့ 433.92MHz ဖြစ်ပြီးပေ၄၀၀အတွင်းအသုံးပြုလိုရပါတယ် ဗိုအားကတော့ 2Vနဲ 1.67mA အနည်းဆုံးအသုံးပြုရပါတယ်....receiver ကတော့ အင်တီနာတိုင်ကတော့ 35 cm နဲ ဗိုအားကတော့ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်က 4V ပါ......လှိုင်းနှုန်းကတော့ ပြောစရာမလိုပါ ဘူးအတူတူပါပဲ...အပေါ်မှာပြထားတဲ့...encoder/decoder ကတော့ ပရိုဂရမ်မလိုပါဘူး
နောက်ထပ်ပြီးကိစ္စရှုပ်လာမှာက receiver အပိုင်းပါပဲ.....သူမှာက transmitter ကနေလာတဲ့ signal ကို output အဖြစ်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီး အဲဒီ output signal (or) data ကို ပြန်ပြီးအသုံးချဖို့ပါပဲ....အဲဒီအချိန်ကျရင်တော့ ထရန်စ္စတာ(transistor) တွေ နဲချိတ်ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖိုပါပဲပေါ်မှာ ပြထားတဲပုံအရတော့ transmitter အပိုင်းမှာ D1 ကိုနှိပ်ရင် encoder ကနေပြီး signal ထုတ်ပေးပြီး transmitter ဆားကဒ်ကနေပြီး ရေဒီယိုလှိုင်းအဖြစ်လွှင့်ထုတ်လိုက်ပါတယ် အဲဒီရေဒီယိုလှိုင်းကို receiverရဲအင်တင်နာတိုင်ကနေဖမ်းပြီး receiver circuit ထဲပို့လိုက်ပြီးထိုမှတဆင့် decoder ကနေပြီး D1 output အဖြစ် signal ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်...signal သာပြောရတာ ဒီကောင်တွေက အလွန်အလွန်သေးငယ်တဲ့ လျှပ်စီး(current)တွေပါပဲ
ထွက်လာတဲ signal ကိုမှ transistor ရဲ base နဲချိတ်ဆက်ပြီး control လုပ်မယ့် မော်တာရဲ့ ဆားကစ်ပတ်လမ်း ကိုအဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်စေပါပြီး မော်တာကိုရှေ့(သို့)နောက် ကိုလည်စေပါတယ် မိမိအလုပ်မည့် အလုပ်မှာများနေပါက...transistor ၃ခု ၄ခုအစား IC ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်....transistor ကို PNP (or) NPN transistor ကို အသုံးပြုလိုရပါတယ်...transistor ပြောမှပဲသတိရတယ် ဆရာကဆားကဒ်ပုံကြည့်ပြီး PNP နဲNPNကို ခွဲအောင်ကို ဟေကောင်မင်းကကောင်မလေးတွေတော ပီတီတီနဲဝင် သွားတယ် မင်းကိုမြင်ရတာတောအန်ထွက်တယ်ကွာတဲ့...အဲလိုပဲ PNP ဆိုရင်မြားခေါင်း ကအထဲကိုဝင်တယ် NPNဆိုရင်မြားခေါင်း ကထွက်သွားတယ်..မှတ်မိအောင်လိုပါ .... အောက်က ဆားကစ်ပုံကြည့်ရင်တော့ရှင်းသွားမှာပါ...
ီDC motor control circuit by using relays
ကိုဦး နဲ့ကိုစောကြည်ဖြူ တင်ပြတဲ့ ckt တွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပြီး လုပ်ရတာလွယ်ကူမယ့်ပုံဘဲ။ လက်တွေ့ တောင် စမ်းလုပ်ကြည့်ချင်စိတ်ပေါ်မိတယ်။
ကျွန်တော် နားမလည်တာ တစ်ခုက HT12E နဲ့HT12D encoder/decoder ic နှစ်ခုက encoding address နဲ့decoding address တူရမလား မတူရဘူးလား။
HT12E/12D datasheet တွေကိုရှာကြည့်မိတယ်။ pin A0-A7 က address pin တွေဖြစ်တယ်။
encoder မှာ pin A0-A7 က ground (00000000) ဖြစ်တဲ့အတွက် decoder မှာရော address pin A0-A7 က အားလုံး ground ဖြစ်သင့်လား။
pin တွေကို လွတ်ထားရင် open ဆိုရင်0လား 1 လား??
အပေါ်ပိုင်းမှာ ပြထားတဲ ckt တွေမှာပါတဲ့.....encoder နဲ decoder မှာ address တူရမလား.... မတူရဘူးလား....addressတူမှအချင်းချင်းဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်လိုရပါတယ်....decoder ဘက်မှာ...က address ကို စစ်ပြီးမှ data အပိုင်းကို ဆက်လက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာပါ...ပုံကိုတော့ထည့်နေတာအဆင်မပြေလို့... .နောက်ဆက်တွဲနဲထပ်ပြပေးလိုက်မယ်...မေးလာစရာတော့ရှိတာပေါဗျာ...အဲဒါဆို ဘာလို address တွေထည့်နေလဲလို့..ဒီကလေးကစားစရာကားလေးကို..control လုပ်တဲ့ remote control မှာရော ကားမှာပါတဲ receiver မှာရော...address မပါတဲ....encoder/decoder သုံးလိုလဲရပါတယ်....4 bits data 8pinsIC လောက်ဆိုရပါပြီ...သူကတော့အရိုးရှင်းဆုံးလေးပါ...ကားမှာရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ရယ်..ဘယ်ကွေ့ညာကွေ့ရယ်ဆိုပြီးအလုပ် ၄ ခုပါဝင်တဲအတွက်ဒီကောင် ကိုရွေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်.....ကားလေးကို..အခြားအမျိုးအစားတူ remote နဲ control လုပ်ရင်လည်းရတယ်....အဲဒါကိုမှ address pin ထပ်ပါရင်....နောက်တစ်မျိုးပြောရင်တောဗျာ...code ခံထားရင် တော့ လှိုင်းနှုန်း(frequency )တူ အမျိုးအစားတူတဲ့....remote နဲ control လုပ်ရင်တော့ code (သို့) address တူမှ....data ပိုင်းကဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်.......
နောက်ထပ်ဥပမာဆက်ပေးရရင်တော့ဗျာ...ဆက်သွယ်ရေးစက်တွေပေါ...သူတိုက data ၁ လိုင်းတည်းပါတယ်.....frequency ကို အမျိုးမျိုးကိုသတ်မှတ်ချက်အတွင်းပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်တယ်....... ဒါပေမယ့်အားနည်းချက်က frequency တူရင် အသံကိုဖမ်းပြီးနားထောင်လိုရပါတယ်....အခုနောက်ပိုင်းစက်တွေမှာတော့ address / code တွေကိုခံလာတဲအတွက်...frequency တူရင်တောင်မှ...... code (သို့) address တူမှ အသံကိုဖမ်းနိုင်လာပါတယ်......အထက်မှာပြထားတဲ ကစားစရာကားလေးကိုcontrol လုပ်တဲအပိုင်းမှာ security မလိုအပ်တဲအတွက် address pin အားလုံးကို ground ပေးထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်..မိမိလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ မှ encoder/decoder ic တွေကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်
ဒီဥပမာနဲပဲ ကိုညီပြောတဲ့ HT12E နဲ့HT12D encoder/decoder ic နှစ်ခုက encoding address နဲ့decoding address တူရမလား မတူရဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းက...ရှင်း သွားလောက်ပါပြီ......
နောက်မေးခွန်းတစ်ခု encoder မှာ pin A0-A7 က ground (00000000) ဖြစ်တဲ့အတွက် decoder မှာရော address pin A0-A7 က အားလုံး ground ဖြစ်သင့်လား။
pin တွေကို လွတ်ထားရင် open ဆိုရင်0လား 1 လား?? အတွက် ကတော့ ကျနော် datasheet မှာပြထားတာက....ground ချထားရင်0ဖြစ်ပြီး....pin တွေကိုလွတ်ထားရင်တော့ 1 ဖြစ်ပါတယ်........ပုံလေးထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့ဖတ်တဲလူတွေအားလုံးနားလည်သွားမှာပါ..အခက်အခဲကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ဖေါ်ပြပေးပါမယ်